China Vahoaka Control Barrier mpanamboatra sy ny orinasa | JIUZHOU METAL
Laza Wire harato
Vahoaka Control Barrier
FOB Price: Araka ny famaritana
Vahoaka fanaraha-maso ny sakana dia fampiasa matetika amin'ny hetsika maro bahoaka. fiarovana ny zava-nitranga manokana, matso, fety, fampisehoana sy ny fanaraha-maso ara-panatanjahantena events.crowd sakana dia tsara toerana avo tsara, tsara tarehy sy mateza vahoaka fanaraha-maso no ilaina.
1) Security sy Safety
2) Traffic & mpandeha an-tongotra Control
5) Kianja / Arenas / Fifanarahana Foibe
6) entanao / Carnivals / Festivals
7) matso / ny fihetsiketsehana
4.Crowd fanaraha-maso ny karazana sakana amin'ny tetezana tongotra
1) fanaraha-maso ny vahoaka sakana amin'ny tetezana fomba tongotra, dia ny tsara indrindra fivarotana vahoaka sakana eo amin'ny fanaraha-maso ny tsena!
2) Ny tetezana-tongotra nanaovana manome fahamarinan-toerana ambony indrindra noho ny sakana, dia toy izany no mahatonga ny vokatra ho safidy tsara ho an'ny fampiasana ny ahitra, malefaka na uneven faritra.
3) The Bridge Foot dia manome ny tsara indrindra ho fanoherana manosika ny vahoaka - koa raha toa ianao mihevitra ny matso, famoriam-bahoaka, na fampisehoana, mifidy izany ho an'ny vahoaka mora fanaraha-maso ilaina.
5.Crowd fanaraha-maso ny karazana sakana amin'ny fisaka tongotra
1) fanaraha-maso ny vahoaka sakana amin'ny fomba fisaka-tongotra, no safidy tsara indrindra amin'ny fisehoan-javatra manokana na toerana izay mitaky funneling vahoaka na ny fifamoivoizana eo amin'ny tsipika mirazotra.
2) Ny fisaka-tongotra nanaovana mampihena ny loza sy ny zavatra mahasolafaka kodiarana fiara hakodian'ny olona mora noho ny tongotra tsy misy fahavoazana ho an'ny barricade.
3) Ny lanjan'ny mizara tongotra fisaka mitovy sy fingotra grommets manome fiarovana fanampiny ho an'ny saropady gorodona. Lavaka roa isaky ny tongotra mamela azy ho mifototra amin'ny tany.
6.Crowd fanaraha-maso ny karazana sakana amin'ny V-tongotra
1) mafana niara-nanatsoboka tafo
vahoaka fanaraha-maso ny sakana dia tanteraka mafana-tafo rehefa avy niara-nanatsoboka welding sakana tsirairay dia tanteraka ao amin'ny Galatiana voafafy fandroana aorian'ny fanamboarana.
Izany no tsara indrindra dingana galvanizing available.This dia midika dia ho lavitra kokoa ny toetr'andro mahatohitra sy mateza, ary haharitra ela kokoa noho ny hafa vahoaka sakana eny an-tsena.
8.Quality sy ny Service no zava-dehibe indrindra
isika manana ny kalitao ny biraon'ny fitsapana, fizahan-toetra ny vokatra isika alohan'ny fiterahana.
Tsy mandray ny andraikitra ho an'ny mpanjifa tena zava-dehibe, isika dia tompon'andraikitra amin'ny vokatra rehetra, ny fahafaham-po dia ny hanome antsika ny tsara indrindra hamaly.
Vovoka mifono Vahoaka Control Barrier matetika fonosana amin'ny hazo na vy pallet mba hiarovana ny PVC ivelany, ary izany dia mora Loading sy mampidina entana avy mampiasa pallets.
Previous: Double Wire harato
Next: Temporary Fefy
Double Wire harato
Triangle hiondrika Fefy